Glass Door Proximity Card Password Fingerprint Lock, Glass Door Intelligent Card Password Fingerprint Lock, လက်ဗွေ Glass ကိုတံခါးသော့ခတ်, Password ကိုလက်ဗွေ Glass ကိုတံခါးသော့ခတ်, Password Smart Card Fingerprint Glass Door Lock
ဇီဝဗေဒ Glass Door ID Card Password Fingerprint Lock, Glass Door Smart Card Password Fingerprint Lock, Metal Shell Fingerprint Glass Door Lock, သတ္တု Shell က Glass ကိုတံခါးလက်ဗွေ Lock ကို, Metal Shell Glass Door Intelligent Card Password Fingerprint Lock, Metal Shell Glass Door Password Fingerprint Lock, Metal Shell Glass Door Password ID Card Fingerprint Lock, Metal Shell Glass Door Password Smart Card Fingerprint Lock No Wiring Required, Metal Shell Glass Door Proximity Card Password Fingerprint Lock, Metal Shell Password Fingerprint Glass Door Lock, Metal Shell Password Smart Card Fingerprint Glass Door Lock
ပွင့်လင်းတံခါးကို: လက်ဗွေရာ, နီးကပ်ကဒ်, စကားဝှက်ကို
တံခါးကိုအထူ: 10-15mm များအတွက်သင့်လျော်သော
ငွေကောက်ခံခေါင်းကို: ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ induction, တင်သွင်း chip ကို, အသားအရေအသိအမှတ်ပြုမှု sensing လက်ချောင်းအဆက်အသွယ်.
အသိအမှတ်ပြုမှုမြန်နှုန်း: 1s ကို
လက်ဗွေရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နည်းလမ်း: 1:N ကို
အယူမှားကိုလက်ခံနှုန်း (ဝေးလံသော): <0.001%
လက်ဗွေပယ်ချနှုန်း (FRR): <0.1%
လက်ဗွေစွမ်းရည်: 100 အပိုင်းပိုင်း
Password ကို / ကဒ်: 8 အုပ်စုများ / 100 အပိုငျးပိုငျး
keyboard ကို: ထိတွေ့ကီးဘုတ်
အလုပ်လုပ်ဗို့: DC က 6V
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ: 4AA ကို×(R6) ဘက်ထရီ (၏စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုမှု 6-9 လများ), အိမ်ရှေ့၏အောက်ခြေတွင်ဟာ android mobile phone ကို USB မှတ်အရေးပေါ်အာဏာကိုထွက်ပေါက်
အနိမ့်ဗို့အားနှိုးဆော်သံ: နှိုးဆော်သံ 4.2V အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသံ
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20℃ ~ + 60 ℃
ပစ္စည်း: သွပ်အလွိုင်း + ကို ABS ပလပ်စတစ်
အရွယ်: 160× 70 × 75mm
အဖုံး: သော့ခတ်, နီးကပ်ကဒ်, ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ
The Metal Shell Glass Door ID Card Fingerprint Lock is user-installable, with U-clip, independent access control, directly installed on the glass door (the door does not need to be drilled), no additional cost. Offline use! Do not connected the network! This device is free Select fingerprint/proximity card/password operation. Can store 100 လက်ဗွေ, ထိတွေ့ကီးဘုတ်, voice prompt operation, USB backup charging, 4×AA batteries.
Applicable to office glass doors or cabinet doors, suitable for small company groups, လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူ, user-friendly, တန်ဖိုးနည်း, direct hanging, easy to install.
I am interested in your product Metal Shell Glass Door Fingerprint Lock, Glass ကိုတံခါး Password ကိုလက်ဗွေ Lock ကို, Glass ကိုတံခါး Password ကို Proximity ကတ်လက်ဗွေ Lock ကို
prev: လက်ဗွေ Glass ကိုတံခါးသော့ခတ်, Password ကိုလက်ဗွေ Glass ကိုတံခါးသော့ခတ်, Password ကို Proximity ကတ်လက်ဗွေ Glass ကိုတံခါးသော့ခတ်, အဘယ်သူမျှမဝါယာကြိုးလိုအပ်ပါသည်
နောက်တစ်ခု: Body Temperature Measurement Face Recognition Attendance Terminal